Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo weftigiisa oo degmada Bandar-bayla loogu qabtay xalfad Sagootina. | allsanaag
Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo weftigiisa oo degmada Bandar-bayla loogu qabtay xalfad Sagootina.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay xalfad lagu sagootinayey isaga iyo weftigiisa oo ku sugnaa mudo laba cisho ah degmada Bandar-bayla ee gobolka karkaar.
Xaflada ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabka degmada Bandar-bayla, maamulka degmada iyo kan gobolka karkaar, masuuliyiin ka tirsan gobolayaasha Dawladda Puntland, saraakiisha Madaxtooyada Dawladda Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xaflada lahadlayka jeediyey ayaa uga mahad naqay shacabka degmada Bandar Bayla sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen madaxweynaha iyo weftigiisa ee socdaal ka ku marayey degaanada gobolada Bari iyo Karkaar.
Sidoo kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sheegay in is ku tashiga Dawladda Puntland iyo shacabkeedu keenay gumardka iyo gargaarka lagu caawinayey shacabka Soomaliyeed ee ku Soo hayaamay Degaanada , kaas oo ku yimi isku tashiga shacabka Puntland iyo dowladooda taasina ay ka turjumayso is jacaylka ummada Soomaliyeed iyo dhaqanka soo jireenka ah ee lagu yaqaaney.
Dhinaca kale bulshada iyo masuuliyiinta maamulka degmada Bandar-Bayla ee gobolka Karkaar ayaa dhankooda uga mahad celiyey madaxweynaha iyo weftigiisa sida hagrasho la’aanta ah ee ay ugu heelan yihiin wax ka ogaanshaha xaalada dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadka reer guuraaga ah iyo degaanada fog-fog ee Dawladda Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isagoo ka jawaabaya codsiga shacabka iyo muulmulka degmada Bandar-bayla waxaa uu ku dhawaaqay in la dhagaxdhigi doono waddo laami ah oo isku xidhidoonta Degmada bandarbayla iyo magaalada Qardho.
‘’ Dawladdu sideedaba waxba ma qabaan karto shacabka la’aantii, waxaan ku tusaale qaadan karnaa wadamada horumaray wax walba oo bulsho u baahan tahay ma ay wada qabataan laakiin waxaan samaynaynaa inaan soo horaysiino waxii muhiim ah oo markaas ka maari waa ah, waxaa hada ugu muhiimsan oo laga hadlaayey waa waddada isku xidha Bandar-bayla iyo Qardho, bishaarose beri hadii illahay idmo waan dhagax dhigaynaa, insha allah waa dhismaysaa waana bilaabaynaa inagoo isku tashanayna, waxaanu ku bilaabaynaa kuna dhamaynaa iskutashiga Dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo wada jira’’ ayuu yiri Madaxweynaha Dawladda puntland
Ugu Danbayn Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka gudoomey hadiyad gaar ah oo ay gudoonsiiyeen haweenka Bandar Bayla madaxweynaha, taas oo ay shegeen in ay hore u gudoonsiyeen Madaxweynihii hore ee soomaliya Illaahay ha’u naxariistee Maxamed siyaad Barre oo isna safar booqasho ah ku yimi degmada Bandar-bayla.
← Mudulood iyo Majeeteen oo madaxweyne wada doonaya Canadian dual citizens can travel freely to the U.S. despite Trump travel ban →